Download kacha mma Wiseplay Nsuso | Gam akporosis
Jose Alfocea | | Ngwa gam akporo, gụgharia, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Na nzaghachi nke arịrịọ nke ọtụtụ ndị ọrụ, bụ ndị, mgbe ha gụsịrị vidiyo vidiyo nke ha gosiri gị ngwa kacha mma iji lelee ọwa + n'efu, ngwa na-aza aha nke Wiseplay, M kpebiri na m ga-eme nke a ọzọ post na video gụnyere na-egosi gị otú ọ dị mfe nweta ndepụta Wiseplay ọhụrụ ma wụnye ha na-enwe ihe niile free ugwo TV na anyá »‹ lá »Android Android.
Ya mere ugbu a na ị maara, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata nke kacha mma website ibudata Wiseplay anatara ma wụnye ha n'ụzọ ziri ezi, pịa «Nọgidenụ na-agụ nke a post» ebe ọ bụ na m ga-akụziri gị usoro dị mfe nke nbudata ndepụta ma wụnye site na nkuzi vidiyo zuru ezu.
1 Ebe nrụọrụ kachasị mma iji budata ndepụta Wiseplay
2 Etu esi etinye ndepụta Wiseplay n'ụzọ ziri ezi
3 Ihe kacha mma Wiseplay
Ebe nrụọrụ kachasị mma iji budata ndepụta Wiseplay
Ebe nrụọrụ weebụ kacha mma maka budata Wiseplay ndepụta anyị nwere ya dị site na ọgbakọ n’onwe ya forowise.com, Nzukọ gọọmentị na nke akọwapụtara nke anyị ga-enwe ike ịchọta ndepụta kachasị mma iji nwee ọ enjoyụ na telivishọn na-akwụ ụgwọ n'efu na gam akporo anyị yana bọọlụ niile Canal + na-enye anyị n'efu.
Naanị site na itinye ngalaba NdepụtaEnweghị mkpa ịdebanye aha na nnọkọ ahụ, anyị ga-enwe ike ibudata ndepụta Wiseplay kachasị mma gụnyere ndị ahụ HD anatara na-emelite kwa ụbọchị iji jide n'aka na ọwa ndị ahụ gụnyere na-arụ ọrụ nke ọma.
Offọdụ n'ime ndepụta kachasị mma nke gụnyere na nzukọ ahụ n'enweghị obi abụọ ọ bụla bụ nke Spain Total adịchaghị HD, Cinema Total adịchaghị HD o Egwuregwu egwu adịchaghị HD nke bụ ndepụta gọọmentị nke nzukọ a ma bụrụ ndị a na-emelite kwa ụbọchị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ndepụta ndị a anaghị arụ ọrụ maka gị, ị nwere ike ịga hụ ihe ozo a ikiri ugwo onyonyo na Spain n’efu iji OnePlay.tv ma obu MegaTV Player.
Etu esi etinye ndepụta Wiseplay n'ụzọ ziri ezi
Na vidiyo a na-agbakwunye na m na-ahapụ naanị akara ndị a, m na-egosi gị usoro dị mfe wụnye ebudatara Wiseplay ndepụta site na nzukọ gọọmentị forowise.com. Usoro nke na - agwa ihe nchọgharị ka ọ mepee ndepụta ebudatara na Wiseplay, ma ọ bụ mebie nke ahụ, ọ bụrụ na nhọrọ a anaghị arụ ọrụ maka anyị, budata faịlụ ahụ n'ụzọ anụ ahụ site na ihe nchọgharị weebụ anyị arụnyere na gam akporo anyị ma detuo ihe ahụ kwuru ebudatara faịlụ, nke ahụ bụ ebudatara Wiseplay ndepụta, na ụzọ / wiseplay.
Site na usoro ndị a dị mfe, dị ka m na-egosi gị na vidiyo agbakwunyere nke ị nwere ike ịhụ dị ka a ga - asị na ọ na - arụ ọrụ zuru oke, ị ga - enwe ike ịhụ ọwa niile akwụ ụgwọ n'efu na, nke kachasị, ihe niile Canal + free tinyere egwuregwu bọl na-agbasa site na Canal Plus Liga.
Ma ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla gbasara otu esi eme ya ibudata ma wụnye ndepụta Wiseplay n'ụzọ ziri ezi, aga m akọwara gị ya site na nzọụkwụ:
Mepee isiokwu a na ihe nchọgharị ị na-eji na ekwentị gam akporo gị (ma ọ bụ iPhone gị).
Pịa na njikọ nke ndepụta Wiseplay ịchọrọ ibudata
Na windo ohuru, pịa na "Mepee na Wiseplay".
Akpaghị aka na Wiseplay ndepụta ga-atụkwasịkwara gị ngwa na ị ga-enwe ike ịmalite na-anụ ụtọ ya ọdịnaya.
Wayzọ ọzọ iji mee ya bụ ihe ndị a:
Detuo URL nke ndepụta ịchọrọ ịgbakwunye. Iji mee nke a, dobe mkpịsị aka gị na njikọ njikọta rue mgbe nhọrọ nnomi gosipụtara.
Mepee ngwa Wiseplay na ekwentị gị
Pịa akara ngosi "+" dị n'ime okirikiri uhie n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ, ebe ọ na-egosipụtakwa "Pịa ebe a iji malite ịgbakwunye ndepụta."
Na mmapụta window, pịa na nhọrọ "Tinye List si URL".
Hichaa URL nke ndepụta ahụ wee pịa "OK".
Dị ka nke mbụ usoro, ndepụta ga-akpaghị aka na-atụkwasịkwara gị ngwa na ọ ga-adị njikere na-egwuri.
Ndị a dị mfe nzọụkwụ, dị ka anyị gosiri gị ma na ihe oyiyi na mmasị video nke ị pụrụ ịhụ dị ka ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè, ị ga-enwe ike -ele niile TV ọwa si ịkwụ ụgwọ n'efu, gụnyere Movistar +, egwuregwu bọọlụ kacha mma, ọwa mba ọzọ, ọwa isiokwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ihe kacha mma Wiseplay
Offọdụ n'ime ndepụta kachasị mma nke gụnyere na nnọkọ ahụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, bụ nke Spain Total adịchaghị HD, Cinema Total adịchaghị HD o Egwuregwu egwu adịchaghị HD nke bụ ndepụta gọọmentị nke nzukọ a ma bụrụ ndị a na-emelite kwa ụbọchị.
Ma, ọ bụghị naanị ha Wiseplay anatara. N'okpuru ebe anyị na-egosi gị ndepụta sara mbara ma mgbe ọ gachara, anyị na-agwa gị n'ụzọ zuru ezu otu esi wụnye ndepụta ndị a ngwa ngwa ma dị mfe ma nwee ọ enjoyụ oge na awa nke ihe nkiri, usoro, akwụkwọ akụkọ, egwuregwu na ọwa telivishọn kpamkpam n'efu.
Want chọrọ ịhụ ọwa akwụ ụgwọ n'efu? Jiri ngwa dị ka Ketchup TV ị ga-enwetakwa ya
Biko, tupu ịga n'ihu, buru n'uche na ndepụta Wiseplay na anyị ga-enye n'okpuru ebe a abụghị nke Androidsis mepụtara, mana ọ bụ nsonaazụ nke ọrụ ndị ọzọ, yabụ na anyị enweghị ike iburu ọrụ maka ịrụ ọrụ ma ọ bụ ndozi ha ziri ezi. Ma ugbu a ee, jikere maka nke a ịrịba chịkọtara nke Wiseplay anatara.
Spanish ndepụta ndepụta Budata njikọ (w3u)
Ndepụta na Bekee Budata njikọ (w3u)
Wisemont TV Budata njikọ (Wisemont)
Live TV ọwa Budata njikọ (androidkez)
All Cinema Budata njikọ(androidkez)
Na-eduzi igwe onyonyo, sinima na ihe egwuregwu Budata njikọ
Series Budata njikọ (androidkez)
Usoro usoro Budata njikọ (androidkez)
Obere ụwa Budata njikọ(androidkez)
Ihe nkiri na usoro FRACAMA Budata njikọ
Ndepụta Ihe nkiri FRACAMA Budata njikọ
Ihe nkiri ndị okenye Budata njikọ (androidkez)
Okenye okenye (+ 18) Budata njikọ (androidkez)
MOVISTAR + (ọwa mmiri) Budata njikọ (androidkez)
Egwuregwu Acestream Budata njikọ (androidkez)
Tecno TV HD Channels Budata njikọ
Tecno TV Spanish Ndepụta Budata njikọ
Ihe nkiri TV nke Tecno Budata njikọ
Tecno TV Listmụaka Ndepụta Budata njikọ
Download TV Budata njikọ
Ndepụta JCMEGA Budata njikọ
JCMEGA Cine m3u Budata njikọ
Ndepụta nke Edson ADIVICI TV Budata njikọ
Androidaldia HD Channels 2.0 Budata njikọ
Okenye ndi okenye TV (+ 18): Budata njikọ
Anime na The Epic Eserese Budata njikọ
Usoro umuaka Budata njikọ
Naanị nkume Budata njikọ
CANOVIC inelọ ihe nkiri Budata njikọ y CANOVIC Cinema 2 Budata njikọ
Ihe nkiri sagas Budata njikọ
Sinima Budata njikọ
Mgbanwe TV Budata njikọ
TV iduzi na spanish Budata njikọ
Football Premium HD PREMIUM Budata njikọ
sports Budata njikọ
Nkuku Budata njikọ
Julia na Marcos Budata njikọ
Ahụhụ Budata njikọ (J. Nuñez)
Spain TV W3uforum Budata njikọ
Theaterlọ ihe nkiri ụlọ Budata njikọ
Ndepụta TV maka mmadụ niile Budata njikọ
Ndepụta sinima maka onye ọ bụla Budata njikọ
Ihe nkiri na ihe nkiri Budata njikọ
Ihe nkiri ụmụaka Budata njikọ
Spanish ọwa TV Budata njikọ
Canal TV Adịchaghị Budata njikọ
Ndepụta usoro maka onye ọ bụla Budata njikọ
'Smụaka sinima Budata njikọ
Ndepụta Walt Disney Budata njikọ
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ndụ 24/7 Budata njikọ
Akụkụ Sherpa Budata njikọ (Sherpa 47)
Movistar SSIPTV Budata njikọ (Manuel)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » gụgharia » Wiseplay ndepụta, saịtị kachasị mma iji budata ha na otu esi etinye ya n'ụzọ ziri ezi
Josama 121 dijo
Maazị Ruiz, mgbe ọ na-akwụsị ihe bụ nke nkwụsị. Nkọwa zuru oke na ịrụ ọrụ ka mma. Ndo maka enweghị ndidi n'ihi enweghị ike n'amaghị etu esi edozi nsogbu ahụ. Ana m ekele gị nke ukwuu maka mbọ gị.
Daalụ nke ukwuu, na mpụga Europe ọ na-esiri ike, mana ihe ị ga-enweta dị ezigbo mma. Daalụ maka ịkekọrịta na ekele.
Zaghachi IAlberto Sánchez
Quilliercio @ hotmail dijo
Ndewo ọma. M na-agbalị ibudata ndepụta ahụ ma m nweta otu ozi otu "bandwit karịrị". Enwere ike ibudata ha na saịtị ọzọ?
Zaghachi Quilliercio @ hotmail
Nwere ike ịkọwapụta nke ọma na ihe a nwere ike ịhụ ma ọ bụ enweghị ike ịhụ? ya mere, nchepụta ga-ewe anyị ụbọchị abụọ ... LUMBRERAS!
Daysbọchị 2 abụghị ụbọchị asaa ọzọ ma ọ bụ ọgba tum tum na f1 dozie ya biko daalụ
Mgbasa Ozi Gi. 205 dijo
A na-akwụ ụgwọ ndepụta GeorgeMix. Ihere, ma na-achọ ịkwụ ụgwọ maka inye ọdịnaya "ọ bụghị iwu" ...
N'agbanyeghị nke ahụ, a ka nwere ndepụta ndị ọzọ maka nnukwu ngosi a.
Nke a bụ ihe mgbe ochie ugbu a, ngwa a anaghị aga ebe ọ bụla na-enweghị TV ndụ, ekwuru na ọgbakọ a ekwuru, dị ka ihe niile metụtara ngwa na netwọkụ.
Enwere m ike ịdị ka mbụ ma nwee ntakịrị mmesapụ aka ma melite pely na f1 ekele
Enweghị m ike ijikọ njikọ ahụ .. Gini ka m ga - eme?
Aha Maica dijo
Ihe onyonyo sinima efuola ma onweghi uzo ị ga-esi budata njikọ ahụ, kaa akara ngosi mgbe niile, biko dozie nsogbu a n'oge adịghị anya, daalụ.
Louis Mont dijo
Ọwa ọhụrụ na ndepụta Luismont, ana m ahapụ gị njikọ ahụ, nwee obi ụtọ na ha:
Zaghachi Luis Mont
nyere aka pls Amaghi m esi nweta ndetu site na nzuko a, enwetaghi m njikọ m choro idebanye aha na email ohuru mana o ka na-agwa m na o jiri ya, Aghotaghi m
Nzaghachi to eloy
Ọ naghị arụ ọrụ nke ọma nye m, enwere m ike ilele ezigbo ọwa Madrid ma ọ bụ Seville, mana na ndị ọzọ ana m enweta ozi "a ga-egwu vidiyo a na mpụga na Amamihe" ma ọ bụ "enweghị ike ibudata vidiyo a". Kedu ihe m nwere ike ịme? Daalụ.
Ndewo John. Ọ na-adịkarị na ụfọdụ ndepụta ma ọ bụ ọwa gụnyere gụnyere mgbe ụfọdụ anaghị arụ ọrụ. Afraidjọ na-atụ m na ọnweghị nhọrọ ma ọlị karịa ịnwale, chere ma ọ bụ gaa na nke ọzọ. Echiche kacha mma!
Ndewo Cesar. Daalụ nke ukwuu maka onyinye. Echiche kacha mma!
M ahapụrụ gị ndepụta ọhụrụ a na-agba na 100 × 100 ọwa niile
Malite ezumike gị na egwuregwu 5 ọhụrụ na ngwa maka gam akporo
Samsung ga-amụba site na mmepụta asaa nke OLED maka Apple